नेता र दलमा परिपक्वताको खडेरी !
-खिमराज गिरी, बालाजु
केही दिन अगाडिको एक राष्ट्रिय दैनिकमा ‘निरीह नेपाल’ र ‘कम्युनिष्टको हांगा बिंगा’ शिर्षक लेख पढ्दा आजभन्दा दुई महिना अगाडि यसै मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा यस पङ्तिकारको ‘माधबकुमार नेपाललाई खुला पत्र’ लेखको याद आयो । मैले लेखेकै थिएँ कि, ‘कमरेड राजनीतिमा धैर्यताको बाध जति बलियो बनायो उति परिपक्वताको खडेरी पर्दैन । पार्टीमा ए नेता मात्र असल हुने हो भने पनि संगठन सुदृढीकरणको लागि कार्यकर्ताले साथ दिन्छन् । त्यसैले गुटबन्दी र पदीय लालचमा नफसी कुनै ब्यक्तिलाई सिध्याउने खेलतिर नलाग्नुहोस् । धैर्य गर्नुहोस् , दिन फर्कन्छ अनि आँट गर्नुहोस् नेकपाको एकताको गाँठो बलियो बनाउने’ आदि आदि धेरै शब्दहरु थिए गुनासोकोरुपमा । तर तपाईहरुको हठ र दम्भले आज नेकपाको स्थिति के भयो अनि बिगतमा कांग्रेसको स्थिति के भएको थियो ? बल्ल चेत पाउनुभयो होला । एकातिर तपाई नेताहरु शब्दबाणमा अल्झिरहनु भएको छ भने अर्कोतिर प्रतिकृयाबादी तत्वहरु खेल मैदानको रमिते बनि बसेका छन । र, पनि मूल घरमा रडाको मच्चिराखेको छ ।
यो सम्झनुहोस – असल कार्यकर्ता कहिलैपनि गुटको पछि लाग्दैनन् । यो कुरा याद गर्नुहोस कि, अझै कुनैपनि नेता भारतीय गोटी बन्छ भने कार्यकर्ता र जनताको लागि सैह्य हुनेछैन । कोभिडको दोश्रो लहरले ब्यापकता लिएको छ । अस्पत्ताल कोभिड बिरामीको चापले भरिएको छ । सिरियस बिरामीलाई भर्ना गर्न पनि हम्मे हम्मे परेको छ । अक्सिजनको अभाव छ । भेन्टिलेटर सीमित छन । अझ भारतको जस्तो भयावह स्थिति आउने हो भने के हालत होला नेपालमा ? यतातिर ध्यान जानुको सट्टा केही राजनीतिक दलहरु भने कोभिड बिरुद्ध सरकारलाई साथ, सहयोग र सुझाव दिनु त कता हो कता उल्टो कसरी सत्ता हत्याउन सकिन्छ भन्दै सत्ता र कुर्चीको क्यान्सर रोग केन्द्रदेखि प्रगेश हुँदै स्थानीय तहसम्म फैलाउँदैछन् ।
गुटबन्दीको राजनीति त्याग गर्नुहोस सबै नेताले ! सरकारले पनि तुरुन्तै भ्याक्सिन आयातमा पहल गरि अस्पत्तालमा जनस्वास्थ्य सम्बन्धि उपकरण उपलब्ध गराउनमा जोड दिन आबश्यक छ । अन्यथा यस्तै मनमुटाव रहि रहने र जनताको सरोकारको विषयमा खेलवाड गरिरहने वातावरण सृजना गर्ने हो भने राजनीतिक दलको पतनको दिन शुरु हुनसक्छ । अझैपनि बिग्रेको केहि छैन । शुभकामना ।